ရေစိုခံ Shine & Matte Glitter Eyeshadow Palette ကိုဝယ်ယူပါ - အခမဲ့ရေယာဉ်နှင့်အခွန်မဆောင်ပါ WoopShop®
ရေစိုခံ Shine & Matte Glitter Eyeshadow Palette
$7.99 ပုံမှန်စျေးနှုန်း $13.99
အရောင် 02 1pcs 03 1pcs 04 1pcs 01 1pcs
မှစ. သင်္ဘောများ တရုတ်နိုင်ငံ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု
02 1pcs / တရုတ် 02 1pcs / ယူနိုက်တက်စတိတ် 03 1pcs / တရုတ် 03 1pcs / ယူနိုက်တက်စတိတ် 04 1pcs / တရုတ် 04 1pcs / ယူနိုက်တက်စတိတ် 01 1pcs / တရုတ် 01 1pcs / ယူနိုက်တက်စတိတ်
ရေစိုခံ Shine & Matte Glitter Eyeshadow Palette - 02 ၁pcs / China backordered နှင့်အဖြစ်မကြာမီကြောင့်ပြန်စတော့ရှယ်ယာဖြစ်သကဲ့သို့တင်ပို့ပါလိမ့်မယ်။
အကျိုးကျေးဇူး - ရေရှည်၊ ဝတ်ဆင်ရန်လွယ်ကူ၊ သဘာဝ၊ ရေစိုခံ / ရေစိုခံနိုင်သော
ပိုက်ကွန် WT: 40g
တစ်ခုတည်းသောအရောင် / ရောင်စုံ - အရောင်လေးရောင်
finish: Glitter, Shimmer, Matte, တောက်ပ, သဘာဝ, ဖဲ
ရေစိုခံ / ရေစိုခံ: ဟုတ်ကဲ့
အသွင်အပြင်လက္ခဏာများ - ရေစိုခံ၊ သဘာဝ၊ ဝတ်ဆင်နိုင်မှု၊ တာရှည်ခံ
စတိုင်:4စတိုင်များ
အလေးချိန် - အသေးစား palette -40g, eyeshadow set-335g
အရွယ်အစား - သေးငယ်သော palette -8 * 6.5 * 1 cm၊ မျက်ခုံးအစု -21 * 17.5 * 2.5cm
ကမ်းလွန်ရေတိမ်ပိုင်းဘဝကို:3နှစ်ပေါင်း
သယ်ဆောင်ရန်လွယ်ကူသော, အသေးစား eyeshadow palette ။
အရောင်လေးမျိုး - အခြေခံအရောင်၊ အဓိကအရောင်၊ halo ဆေးဆိုးခြင်း၊ sequin ပြုပြင်ခြင်း။
စတိုင်လေးခု၊ သမီး၊ မိန်းကလေး၊ အမေနှင့်အစ်မများအတွက်လက်ဆောင်များပေးသည်။
မျက်လုံးပတ် ၀ န်းကျင်တွင်လှပသောအရိပ်များဆွဲရန်လွယ်ကူပြီးအစပြုသူတစ် ဦး အတွက်ကောင်းသည်။
16 ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းအပေါ် အခြေခံ.
ပစ္စည်းကောင်းကောင်း၊ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊
သူတို့ကဖြောင့်စာတိုက်ပုံးထဲသို့ပစ်ချ၏။ မြန်မြန်လာ။ ထုပ်ပိုးခြင်း (အလွန်ကောင်းသည်) သို့သော်ယုံကြည်စိတ်ချမှုမရသည့်တိုင်၎င်းသည်မပြိုလဲခဲ့ပါ။ သို့သော်အရိပ်ကောင်းကဲ့သို့အလွန်တောက်ပမဟုတ်ကဲ့သို့ဖြစ်ကြ၏။ သူတို့ကဘာမှမွှေးကြိုင်ဘူး။ တောက်ပသောမုန့်တောက်ပပြီးကောင်းစွာစောင့်ရှောက်ပါ။ ငါကြည့်ရှုရန်ကွဲပြားခြားနားသောငါ့မျက်စိခြယ်သ။ ကျွန်တော်နဲ့ကိုက်ညီပါတယ်
ဖောက်သည် 5.0 ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းအပေါ်အခြေခံပြီးကျွန်တော်တို့ကို5/ 71908 ဘယ်လောက်ရှိသလဲ။